လေယာဉ်ပေါ်တင်ဆောင်ခွင့်မရတဲ့ အမျိုးအစား | t h oeh tan e
မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ ပါတဲ့ ခင်ဗျားတို့ အရေးအသားတွေမှ ကဗျာ
နာမည်ကြီှးဆိုရင် သူများထက်ထူး နဖူးဟိုဒင်းပေါက်နေသလို ဝိုင်းရိုသေကိုးကွယ်တာမှ ကဗျာ
ခင်ဗျားတို့ရပ်ကွက်ထိပ် ဆိုက်ကားဂိတ်က ကြားသမျှအတင်းအဖျင်းတွေမှ ကဗျာ
ခင်ဗျားကြီးတော်ကြီး အိပ်နေရင်းယောင်ပြီးအော်တာကို ချရေးလိုက်တာမှ ကဗျာ
ခင်ဗျားဘကြီး နှစ်လုံး/သုံးလုံး အတိတ်စိမ်းတွေကူးရေးထားတာမှ ကဗျာ
ခင်ဗျား အဖေနဲ့အမေ စပ်ပြီးကျလာတာကမှ ကဗျာ
ခင်ဗျားအဖေက တစ်ရွာမှာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးတော့ကာ
ခင်ဗျားမှာ ကဗျာတူမောင်နှမ ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲ
ခင်ဗျားအစ်ကို စားပြီးနားမလည်လုပ်ထားတာကမှ ကဗျာ
ခင်ဗျားအစ်မ slow-down မိတာမှ ကဗျာ
ခင်ဗျားရည်းစား ကြားကားဝင်ဆွဲခံရတာမှ ကဗျာ
ခင်ဗျား ယောက်ဖကြိုက်တဲ့ နိုင်ငံခြားသီချင်းတွေဘာသာပြန်ပြတာမှကဗျာ
ခင်ဗျားရဲ့တစ်နေ့တာ အမြီးမြောက်လိုက်၊ အီးပေါက်လိုက်ကို documentary လုပ်ပြတာမှ ကဗျာ
ခင်ဗျားညီမလေး lotion လူးပြတာရော ခင်ဗျားအတွက် ကဗျာဆိုမလား???
ကဗျာဗေဒရဲ့ အန္တိမလျှို့ဝှက်ချက်က ခင်ဗျားအဖိုး ကျုပ်အဖေဖြစ်နေတာပဲ။
၂ဝ၁ဝ ဇန်နဝါရီ ၆ရက်၊ ည ၉း၃ဝ
(ဇော်ဂျီနဲ့ စစချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်းတယ်လို့ ဝိုင်းဩဘာပေးလည်း ကျေးဇူးပဲ)
8 Responses to “လေယာဉ်ပေါ်တင်ဆောင်ခွင့်မရတဲ့ အမျိုးအစား”
အဖိုးနဲ့အဖေကို wheel chair နဲ့တင်ခေါ်လို့ရပါတယ်..lotion ကတော့မရဘူး
a pyat shin pee mha pae tat ya mhar pot naw 😀
ကဗျာဆရာတွေအတွက်ကတော့ မြင်မြင်သမျှတွေက ကဗျာတွေချည်း ဖြစ်ကုန်တာပါပဲ။ (ချစ်သူ့ မျက်ချေးကအစ… )
ဒါပေမယ့် ဖတ်သူက ကဗျာဆရာရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို မမိရင်တော့… ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်သူကတော့ ကိုယ်နားလည်သလို(ကဗျာဆရာရဲ့ ဆိုလိုရင်းမဟုတ်ဘဲ) ဆွဲဖတ်၊ ဆွဲတွေးသွားရင်ရော ကဗျာဆရာတွေက ကျေနပ်(ကြည်နူး) နေဦးမလား(ပါ့မလား) ။
(စာဖတ်ပိန်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်.ဒါပေမယ့် စာပေစိတ်ဝင်စားတယ်.ဟိုကြည့်၊ ဒီကြည့်၊ ဟိုဖတ်၊ ဒီဖတ်ပဲ)
လေယဉ်ပေါ်တင်လို့မရရင် … လေယဉ်တင်သင်္ဘော နဲ့ တင်မှာပေါ့…း)
Hey THU MA,,dnt worry if u dnt understand wat the poet/writer is trying to say,,:D
i think thatapoet or writer believes that being understood would mean losing his chance of ever being consideredagenius,,,only writers can understand whatawriter is trying to say.
So yah,u should feel free thinking after reading poems,,,and offcuz poets should be happy too watever outcomes has given by fans.
yah,,sometimes i dnt get wat the poets are trying to say,,,,as they may use simple word but behind it there isareally deep thinking and based on completely different story,,,darnnn,,,ha ha ha ,,lolxxxx
i m justapoetry fan too,and meanwhile trying to write my own poems too,but mine are not so brilliant according to my own lover poet,ko thoe htane,here i m just saying wat i think of poets/writers and trying to understand them,,since i m IN LOVE withav difficult poet…lolx.:D
kant kwet yan ma shi…
yeah everyone interprets an art piece with their own calibre and perceives differently. that dynamic outcome is the real beauty.
once the art piece is done, artist has no responsibility about the meaning of his creation. he could even feel different taste each time he look at his stuff ^^
ကဗျာ၊ (ပန်းချီ) နဲ့ ၊ ၀တ္တု၊ ရုပ်ရှင် … တွေရဲ့  ကွာခြားချက်က အဲဒါတွေများလား … ၀တ္တု၊ ရုပ်ရှင် တို့ကျတော့ သူတို့ရဲ့ ဆိုလိုချက်ကိ ပရိသတ်သိအောင်ချပြကျတယ်လေ …
feel free ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့။
Thanks on behalf of Mr Poet.
Love to read your own poems too. Hoping to read.
« Bye Bye 2009!!!
ချစ်တယ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လုံလောက်တဲ့… »